Akụkọ - NDPSMỌD FOR MAKA WELDER THERMOPLASTICS
Eldgbado ọkụ bụ usoro ijikọ elu site na iji nwayọ nwayọ. Mgbe ịgbado ọkụ thermoplastics, otu n’ime ihe ndị bụ isi bụ ihe n’onwe ya. N'ihi na dị ka ogologo dị ka plastic ịgbado ọkụ anọwo na ọtụtụ ndị ka na-adịghị aghọta ihe ndị bụ isi, nke bụ oké egwu a kwesịrị ekwesị Weld.
The otu iwu ịgbado ọkụ thermoplastics bụ ị ga-ịgbado ọkụ dị ka-plastic ka amasị-plastic. Iji nweta a ike, na-agbanwe agbanwe Weld, ọ dị mkpa iji jide n'aka gị mkpụrụ na gị ịgbado ọkụ mkpanaka ndị yiri; dịka ọmụmaatụ, polypropylene ka polypropylene, polyurethane ka polyurethane, ma ọ bụ polyethylene na polyethylene.
Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ maka ịgbado ọkụ dị iche iche nke plastik na usoro iji hụ na ịgbado ọkụ kwesịrị ekwesị.
Ịgbado ọkụ Polypropylene
Polypropylene (eyi) bụ otu n'ime ihe kachasị mfe thermoplastics a ga-agbanye na iji ya maka ọtụtụ ngwa dị iche iche. Eyi nwere nguzogide kemịkalụ magburu onwe ya, ike ndọda dị oke ala, ike dị elu ma ọ bụ nke kacha sie ike na polyolefin. Ngwa a nwapụtara iji PP eme ihe bụ ngwa ọrụ, tankị, ọwa mmiri, etchers, hoods fume, scrubbers na orthopedics.
Iji Weld eyi, welder mkpa ka a na ihe dị 572 ° F / 300 ° C; ịchọpụta ọnọdụ okpomọkụ gị ga-adabere n'ụdị ụdị welder ị na-azụ na ndụmọdụ sitere n'aka onye nrụpụta. Mgbe ị na-eji welder thermoplastic na 500 watt 120 volt kpo oku, ekwesịrị idozi ikuku ikuku na ihe dịka 5 psi na rheostat na 5. Site na ịme usoro ndị a, ị kwesịrị ịnọ nso 572 ° F / 300 ° C.
Eldgbado ọkụ Polyethylene
Ọzọ dị mfe thermoplastic ka ịgbado ọkụ bụ polyethylene (Pee). Polyethylene na-enwe mmetụta na - eguzogide ọgwụ, nwere nguzogide abrasion pụrụ iche, ike dị elu, nwere ike ịmịcha ma nwee mmiri dị ala. Ngwa a gosipụtara maka PE bụ bins na liners, tankị, arịa ụlọ nyocha, osisi mbadamba na slides.
The kasị mkpa na-achị banyere ịgbado ọkụ polyethylene bụ na i nwere ike Weld ala elu ma ọ dịghị elu na ala. Pụtara, ị nwere ike ịgbado mpempe akwụkwọ polyethylene (LDPE) dị mkpụmkpụ na mpempe akwụkwọ polyethylene dị elu (HDPE) mana ọ bụghị. Ihe kpatara ya bu ihe di mfe. Ọdịdị dị elu dị elu karịa ka ọ na-esiri ike karị ịkụtu ihe ndị ahụ iji ịgbado ọkụ. Ọ bụrụ na akụrụngwa enweghị ike ịkụtu ya n'otu oge ahụ, ha enweghị ike ijikọ ọnụ nke ọma. Ndị ọzọ karịa ijide n’aka na njupụta gị dakọtara, polyethylene bụ plastik mara mma dị mfe ịgbado ọkụ. Iji weld LDPE ịkwesịrị ịnwe okpomọkụ na ihe dịka 518 ° F / 270 ° C, onye na-achịkwa ya na 5-1 / 4 ka 5-1 / 2 na rheostat na 5. Dị ka PP, HDPE bụ weldable na 572 Celsius F / 300 Celsius.
Ndụmọdụ maka Weld Kwesịrị Ekwesị
Tupu ịgbado ọkụ thermoplastics, enwere usoro ole na ole dị mkpa iji dị mkpa iji hụ na mgbatị kwesịrị ekwesị. Hichaa elu niile, gụnyere mkpado ọkụ, na MEK ma ọ bụ ihe mgbaze yiri ya. Uzo mkpụrụ nnukwu iji na-anabata ịgbado ọkụ nkpa-n'aka na mgbe ahụ bee na njedebe nke ịgbado ọkụ mkpanaka a 45 Celsius n'akuku. Ozugbo welder ahụ gbanwere ọnọdụ kwesịrị ekwesị, ịkwesịrị ịkwadebe mkpụrụ ahụ na mkpado ọkụ ahụ. Site na iji akpaka ọsọ n'ọnụ a otutu nke Prep ọrụ na-mere gị.
Jide welder ahụ ihe dị ka anụ ọhịa dị elu karịa mkpụrụ osisi ahụ, tinye mkpanaka ịgbado ọkụ na isi ma megharịa ya na mgbago elu na ala ugboro atọ ruo anọ. Ime nke a ga - eme ka igwe mkpado kpoo ọkụ mgbe ị na - eme ka mkpụrụ ahụ dị ọkụ. Ihe ngosi nke mkpụrụ dị njikere maka ịgbado ọkụ bụ mgbe ọ malitere ịmalite mmetụta fogging - yiri ịfụ na otu iko.
Iji ike na-agbanwe agbanwe nsogbu, inupụ ala na buut nke n'ọnụ. Buut ga-agbanye mkpanaka ịgbado ọkụ n'ime mkpụrụ. Ọ bụrụ n ’ịhọrọ, ozugbo mkpado ịgbado ọkụ na-esochi mkpụrụ ahụ, ịnwere ike ịhapụ mkpara ahụ ma ọ ga - akpachapụ onwe ya.
Kasị thermoplastics bụ sandable na ike nke Weld ga-emetụta mgbe sanded. N'iji ájá ájá 60, hichapụ ájá n'elu akụkụ nke bekee ịgbado ọkụ, wee rụọ ọrụ ruo 360 sand sand sand iji nweta ebe dị ọcha. Mgbe ị na-arụ ọrụ na polypropylene ma ọ bụ polyethylene, ọ ga-ekwe omume ịmaliteghachi ihu ha na-egbuke egbuke site na iji ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ na-acha odo odo. (Buru n'uche na a ga-agbaso usoro nchekwa ọkụ nkịtị.) Ozugbo emechara usoro ndị a, ị kwesịrị ịnwe weld nke yiri foto dị na ala aka ekpe.
Idebe n'elu Atụmatụ n'uche, ịgbado ọkụ thermoplastics nwere ike ịbụ a pụtara mfe usoro-amụta. A awa ole na ole nke na-eme ịgbado ọkụ ga-enye ndị "obi na-adị" maka ịnọgide na-enwe nri ọbụna nsogbu na mkpanaka ogologo ala ịgbado ọkụ na mpaghara. Na na na na dị iche iche nke plastik ga-enyere nna usoro. Maka usoro na ụkpụrụ ndị ọzọ, kpọtụrụ onye na-ekesa plastik dị na mpaghara gị.